के हो मास्क माउथ? ६ लक्षण र रोकथामका उपाय
डा रीपु सिंह आइतबार, असार ६, २०७८, ११:०१
विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको कोबिड १९ महामारीमा माक्स तथा फेस सिल्डको प्रयोग सबैका निम्ति सुरक्षाकवज सिद्ध भएको छ। एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा भाइरसको संक्रमण फैलने प्रक्रियालाई रोक्नका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा अमेरिकाको रोग नियन्त्रण केन्द्रले सामाजिक दूरी कायम राख्नुका साथसाथै मास्कको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न जनचेतनामूलक सूचनाहरु एवं कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेसँगै सार्वजनिक स्थलमा मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरिन थालिएको थियो।
आफू र आफ्नो परिवारको स्वास्थ्यको सुरक्षाका निम्ति सचेत हामी सम्पूर्णमा, मास्कको प्रयोग यति नियमित बन्यो कि मास्क अब हाम्रा लागि 'अभिन्न वस्तु' भइसकेको छ। शरीरको सुरक्षाका लागि कपडाको प्रयोग गरिए जस्तै माक्सको प्रयोग पनि अनिवार्य बन्दै गएको छ।
मास्कको यही नियमित प्रयोगले हामीलाई भाइरस संक्रमणको जोखिमबाट केही सुरक्षा प्रदान गरे पनि यसका केही नकारात्मक प्रभाव पनि देखिन थालेका छन्। यसै सन्दर्भमा भरखरै मात्र प्रकाशित विभिन्न लेखरचना तथा सामाजिक सञ्जालमा देखिएको 'मास्क माउथ' शब्दले हामी सबैको ध्यानाकर्षण गरेको छ।
मास्क माउथ भनेको के हो ?
लामो समयसम्म मास्कको निरन्तर प्रयोगका कारण मुखमा देखिने विभिन्न समस्याहरुलाई मास्क माउथ भनिएको छ।
मास्क माउथका प्रमुख लक्षणहरु–
१) मुखको सुख्खापन
यो एक लक्षण मात्र नभइ आफैंमा विभिन्न समस्याको संकेत पनि हो। यसका विभिन्न कारणहरुमध्ये शरीरमा पानीको मात्रा कम हुनु (डिहाइड्रेसन) पनि एक हो। थुकले दाँत तथा मुखलाई ओसिलो पारिराख्ने तथा हानीकारक किटाणुबाट सुरक्षा दिने गर्दछ। मुख भित्र प्रयाप्त थुक नभएमा मुख सुख्खा भई विभिन्न समस्या देखा पर्न सक्छन्। जस्तै दन्त सडन, ढुसी (फंगल इन्फेक्सन), स्वासको दुर्गन्ध, गिजा सुन्निने , मुखमा घाउ आउने इत्यादि।
२) मुखको दुर्गन्ध
मुख भित्र विशेष गरी जिब्रोमा लामो समयदेखि जमेर बसेको फोहर, मुख भित्रका संक्रमणहरु जस्तै गिजाको रोग, मुख भित्रका घाउहरु, दन्त सडन इत्यादि मुखको दुर्गन्धका मुख्य स्रोतहरु हुन्। यस अवस्थामा मुख भित्र भोलाटाइल सल्फर कम्पाउन्डस्को मात्रा बढ्ने भएकाले मुख तथा स्वास दुर्गन्धित हुने गर्दछ। मुखको सुख्खापनले यस समस्यालाई अझै बढाउँदछ।
३) गिजा सुन्निने तथा गिजाबाट रगत आउने
दाँत तथा मुखको राम्रो र नियमित सरसफाई नभएर दाँतमा जम्न पुगेका दन्तलेउ नै यस समस्यको प्रमुख कारण हो। जस्तै गिजा रातो हुने, सुन्निने र गिजाबाट रगत आउने आदि। यस अवस्थालाई समयमै रोकथाम तथा उपचार नगरेमा यो अझै बढ्दै जान्छ र यसले पेरियोडोन्टिस्टको रुप लिन्छ।
४) दन्त सडन
फर्मेन्टेबल कार्वोहाइड्रेटकोको नियमित सेवन, मुखको सफाईमा अनियमितताका संगसंगै मास्कको प्रयोगबाट हुने मुखको सुख्खपनले दाँतमा एसिड बनाउने ब्याक्टेरिया (Streptococcus mutans, Lactobacilli) बढ्न मद्दत गर्दछ। यसले दन्त सडन तथा यससँग सम्बन्धित जटिलताहरुलाई पनि निम्त्याउँदछ।
५) Candida Infection
मुखमा थुकको मात्रा कम हुँदा यसले मुखको पर्यावरणलाई परिवर्तन गर्ने गर्दछ। जसका कारण मुखमा Candida जस्ता ढुसीको संक्रमण पनि हुन सक्दछ।
६) Angular Cheilitis तथा अल्सरहरु
मास्कको निरन्तर प्रयोगले मुख ओरिपरिका छालालाई ओसिलो पारिराख्ने काम गर्दछ जुन व्याक्टेरियाको संक्रमणका लागि अनुकूल वातावरण हो। तसर्थ यस्ता संक्रमणका कारण ओठ तथा ओठ वरिपरिका छालामा घाउ आउनुका साथै ब्लनगबिच ऋजभष्ष्तिष्क जस्ता समस्याहरु पनि देखिन सक्दछन्।
माक्स माउथका संभावित कारणहरु:
–शरीरमा पानीको मात्रा कम हुनु
लामो समयसम्म नियमित मास्कको प्रयोग गरिरहनु पर्ने वाध्यतामा पानी पिउने कार्यमा कमी हुने भएकाले शरीरमा पानीको मात्रा कम हुन गई मुख पनि सुख्खा हुने गर्दछ।
–स्वास प्रस्वासको प्रक्रियामा हुने बदलाब
मास्कको प्रयोग गरिरहदा स्वासप्रस्वास पनि छोटोछोटो र छिटाछिटोे हुने गरेको पाइएको छ। धेरैजसो मानिसहरुले यस अवधिमा नाकबाट नभइ मुखबाटै स्वास फेर्ने गरेको पनि पाइन्छ। जसका कारण मुख सुख्खा हुने गर्छ। यसले स्वासप्रस्वास प्रक्रियालाई नै परिवर्तन गरिदिन्छ।
मास्क लगाइ रहदा हाम्रो स्वासप्रस्वासबाट फालिने कार्बनडाईअक्साइड पुनः हाम्रै मुखको वरिपरी नै जम्मा भई रहने गर्दछ। यसरी जमेको कार्बनडाईअक्साइडले व्यक्तिलाई गिजा तथा मुखको संक्रमणको जोखिममा पार्न सक्दछ।
–मुख तथा दाँतको सरसफाइमा अनियमितता
सार्वजनिक स्थल वा अरु व्यक्तिको निकट हुनु पर्दा लगाइने फेसमास्क तथा फेससिल्डको प्रयोग संगै मानिसमा मुख तथा दाँतको सफाइमा अनियमितता हुने गरेको देखिएको छ, जुन मुख र दाँतमा हुने संक्रमणको प्रमुख कारण हो।
मास्क माउथको रोकथाम कसरी गर्ने?
हामीमा मास्क माउथका लक्षणहरु देखा नै परे पनि कोबिड १९को संक्रमणबाट बच्नका लागि मास्कको प्रयोग नगरी सुख्खै छैन। अझ भनौं कोभिड(१९ को सुरक्षाका लागि मास्क अनिवार्य जस्तै बनेको छ। संक्रमण रोकथामका लागि यो एउटा प्रभावकारी विकल्प पनि हो। माक्स माउथ भैहाले पनि धेरै आतिनु पर्ने हुँदैन। समयमै यसको प्रभावकारी रोकथाम तथा उपचार अवस्य पनि गर्न सकिन्छ ।
– प्रशस्त पानी पिउने जसले मुखलाई ओसिलो बनाई राख्दछ।
– दाँत तथा मुखको नियमित सरसफाईमा ध्यान दिने।
दिनको दुई पटक (बिहान–बेलुकी) फ्लोराइडयुक्त मञ्जन प्रयोग गरी सही तरिकाले दाँत माझ्ने,
दिनमा कम्तिमा एक पटक डेण्टल फ्लस प्रयोग गरी दाँतहरुका बीचको भागमा सफा गर्ने,
जिब्रोको राम्रो सफाई गर्ने जसका लागि तयलनगभ कअचबउभच अथवा ब्रसको पछाडिको भागलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ,
बारम्बार पानीले कुल्ला गरी मुख सफा राख्ने।
– मुखको संक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्नका निम्ति रक्सी जन्य पदार्थ नमिसाइएका mouth wash को प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ।
– चिनी रहित जाइलिटोल युक्त chewing gum को प्रयोगले पनि मुखमा पर्याप्त थुक बन्ने प्रक्रियामा मद्दत गर्दछ।
– सफा मास्कको प्रयोग गर्ने तथा मास्कबाट सावधानी पूर्ण बिश्राम लिने:
निरन्तर मास्कको प्रयोगले श्वासप्रश्वासमा अप्ठेरो महसुस भएमा केही समयका लागि मुख खुला गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरुले बीच बीचमा कुनै सुरक्षित स्थानमा गइ सुरक्षित तरिकाले मास्क हटाइ केही बेरको विश्राम वा ब्रेक लिन पनि सक्नुहुन्छ। तर यसो गर्दा सो स्थान र परिवेशको जोखिमका बारे भने सचेत हुन जरुरी छ।
६. पोषिलो रेसादार तथा भिटामिन–सी युक्त खानेकुराहरुको सेवन गर्नु पर्दछ।
७. सूर्ती जन्य तथा मादक पदार्थको सेवन गर्नु हुँदैन।
यसरी माक्स हाम्रो शरीरको अन्य कपडाहरु जस्तै जीवनको अभिन्न अंग नै बन्दै आएको छ। विभिन्न संक्रमणको सुरक्षा कवज जस्तै बन्दै गएको मास्कको प्रयोग सँगैसँगै शरीरमा विभिन्न समस्याहरु पनि देखा परेकाछन्। माक्सको उचित प्रयोग, मुखको सरसफाइमा विशेष ध्यान र केही सावधानी अपनाउन सकियो भने यसले सिर्जना गरेको 'माक्स माउथ' जस्तो समस्याबाट सजिलै बच्न सकिन्छ।
(डा सिंहले पेरियोडोन्टोलोजी एन्ड ओरल इम्प्लान्टोलोजीमा एमडीएस गरेकी छन्)